ईर्ष्या र GERD: मतली र Stomachaches को उपचार कसरी गर्ने - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
मनोरञ्जन कम्पनी, औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार घरपालुवा जनावर समुदाय कम्पनी, चेकआउट चेकआउट प्रेस खेलहरु समुदाय, कल्याण कम्पनी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर भारी खेल कम्पनी
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> ईर्ष्या र GERD: मतली र पेट का दर्द कसरी व्यवहार गर्ने
ईर्ष्या र GERD: मतली र पेट का दर्द कसरी व्यवहार गर्ने
यदि तपाईं पनी पेटबाट छाती र घाँटीमा खानेकुरा पछाडि जलेको महसुस गर्नुहुन्छ भने, तपाईं एक्लो हुनुहुन्न। Million करोड भन्दा धेरै अमेरिकीहरू कम्तिमा एक पटक एक पटक एक पटक ईर्ष्याको असुविधाको अनुभव गर्छन्, अनुसार अमेरिकी ग्यास्ट्रोएन्टेरोलजीको कलेजमा।
ईर्ष्यालुपन भनेको के हो भनेर बुझ्नको लागि हामीले यो गाईड सिर्जना गरेका छौं, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईं यसलाई कसरी समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो समाचार यो हो, त्यहाँ धेरै प्रभावकारी उपचार विकल्पहरू छन् जलेर जलाउन र असुविधा रोक्न मद्दत गर्न मद्दत गर्दछ। यो ओभर-द-काउन्टर वा पर्चेको औषधिहरू प्रयोग गरेर, वा केही जीवनशैली परिवर्तनहरू गरेर होस्, हामीले तपाईंलाई कभर गरेका छौं।
ईर्ष्या भनेको के हो?
ईर्ष्याटर्न, वा ग्यास्ट्रोजोफेगल रिफ्लक्स तब हुन्छ जब अत्यधिक मात्रामा एसिड रिफ्लक्स (पढ्नुहोस्: पछाडि सर्नुहोस्) अन्ननलिकामा, पेटको हड्डीलाई जोड्ने एक मांसपेशी ट्यूब। यो सामान्यतया हुन्छ जब एसोफैगस र पेट बीचको सानो मांसपेशीले आराम गर्न थाल्छ, पेटको अम्ललाई सार्न अनुमति दिईन्छ।
ईर्ष्यालाई कस्तो लाग्छ?
ईर्ष्याको सामान्य लक्षणहरू जलाउने पीडा वा असुविधाको भावनाको रूपमा वर्णन गरिएको छ जुन छातीबाट घाँटी र घाँटीतिर जान्छ। केहि अवस्थाहरूमा, मान्छेहरूले उनीहरूको घाँटीको पछाडि तीतो वा अमिलो स्वाद अनुभव गर्दछन्। नामको बावजुद, यसले तपाईंको मुटुसँग केहि लिने छैन। बरु यो तेसिलोको उत्तेजना हो तपाईका टिश्युहरूलाई उत्तेजित पार्ने।
के कारण ईर्ष्या उत्पन्न हुन्छ?
ठुलो खाना खाए पछि दुखाइ अनुभव गर्नु अधिक सामान्य छ, विशेष गरी चराहरूमा उच्च। पूर्ण पेटले गर्दा आन्तरिक दबाबले एसिडलाई एसोफैगसमा बल गर्न सक्छ, जसले लक्षणहरू निम्त्याउन सक्छ। अधिक वजनको कारण यो दबाबलाई बिगार्न सक्छ र ईयर्नबर्न बढी सम्भावना बनाउँछ। फ्याटयुक्त खाना र अत्यधिक खानपानले पाचनलाई धीमा पार्न सक्छ, जसले एसिड भाटालाई पनि योगदान पुर्‍याउँछ।
यदि तपाइँ जलेको महसुस गर्दै हुनुहुन्छ भने, वा भर्खरै ठुलो, रमाइलो खाना खाएको छ भने, तपाईं पनि सोफेमा ढल्किनबाट बच्न सक्नुहुन्छ। जब हामी इमानदार हुन्छौं, गुरुत्वाकर्षणले पेटको एसिडलाई माथिल्लो तर्फ रोक्नको लागि हाम्रो पक्षमा काम गर्दछ। जे होस्, यदि तपाईं सुत्न बस्नुभयो भने, तपाईलाई ईर्ष्याको अनुभव हुन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ किनकि गुरुत्वाकर्षणले तपाईंको एसोफैगसमा प्रवाहित एसिडलाई रोक्न सक्दैन।
यो ईर्ष्या वा केही अधिक हो?
लगभग सबैले कुनै न कुनै बिन्दुमा ईर्ष्यालु लक्षणहरू अनुभव गर्नेछन्, विशेष गरी ठूलो खाना खाएपछि लक्षणहरू कहिलेकाँहि केहि घण्टा सम्म चल्दछन्। यद्यपि, केही व्यक्तिहरूले लामो हड्डीहरू अनुभव गर्दछन्, लक्षणहरू हप्तामा दुई पटक भन्दा बढि देखा पर्दछ। यस अवस्थामा तपाईसँग एउटा हुन सक्छ बढी गम्भीर मेडिकल अवस्था ग्यास्ट्रोएफिजियल रिफ्लक्स रोग, वा GERD भनिन्छ।
GERD कमजोर मांसपेशि भल्भको साथ मानिसमा देखा पर्दछ जब लोअर एसोफेजियल स्फिंटर (LES) भनिन्छ। यसले धेरै चोटि आराम गर्दछ र पेटको एसिडले अन्नलाई माथि सार्दछ।
रक्त शर्करा को सामान्य दायरा के हो
यो अनुमान गरिएको छ बीस% अमेरिकी जनसंख्याको GERD छ, त्यसैले किन GERD जागरूकता हप्ता जस्ता जागरूकता पहलहरु महत्त्वपूर्ण छ। २०१ G GERD जागरूकता हप्ता नोभेम्बर १-2-२4 सम्म चलेको छ, त्यसैले अर्को वर्षको क्यालेन्डरमा अपडेट रहनुहोस्।
म कसरी ईर्ष्याबाट मुक्ति पाउन सक्छु?
भाग्यवस, ईर्ष्याको अनुभव गर्ने व्यक्तिहरूको लागि धेरै प्रभावकारी उपचार विकल्पहरू छन्। धेरै व्यक्तिले दुबै औषधी र ओभर-द-काउन्टर औषधी, केही जीवनशैली परिवर्तनका साथै केही प्राकृतिक र घरेलु उपचारहरूको साथ राहत पाउँदछन्।
ईर्ष्याको लागि लोकप्रिय ओभर-द-काउन्टर औषधीहरूले एन्ट्यासिडहरू, टम्स वा रोलाइड्स समावेश गर्दछ, जसले पेटको एसिड र एसिड अपचलाई बेवास्ता गर्ने काम गर्दछ। केही व्यक्ति एसिड ब्लकरहरूलाई रुचाउँछन्, जसले पेटको एसिडको वास्तविक मात्रा कम गर्दछ। यसमा Axid AR, Pepcid AC, Prilosec OTC, र Tagamet HB समावेश छ।
सम्बन्धित : Prevacid बनाम Prilosec
यदि तपाईंको ईर्ष्या भने अधिक नियमित वा गम्भीर छ, र अधिक काउन्टर विकल्प प्रभावकारी छैनन् भने, तपाईंलाई प्रिस्क्रिप्शन औषधी आवश्यक पर्न सक्छ। यी सामान्यतया ओभर-द-काउन्टर ब्रान्ड विकल्पहरूको प्रबल संस्करणहरू, साथै प्रोटोन पम्प इनहिबिटर (पीपीआई) ड्रग्स प्रीभ्यासिड र नेक्सियम सहित।
एउटा जीवनशैली परिवर्तन जुन धेरै व्यक्तिहरूले अपच र ईन्डबर्नलाई कम गर्नका लागि प्रभावकारी रूपमा रिपोर्ट गर्छन् पूर्ण नभएसम्म मात्र खाने अभ्यास गर्नुहोस्।
यो पनि राम्रो विचार हो कि कुन खाद्य पदार्थले तपाईंको ईर्ष्यालाई उत्प्रेरित गर्छ र तिनीहरूलाई सम्भव भएमा बेवास्ता गर्नुहोस्। ईर्ष्यालाई ट्रिगर गर्नका लागि चिनिने खाद्य पदार्थहरूमा कफी, मदिरा, कोमल पेय, मसलादार खानाहरू, टमाटर, चकलेट, पेपरमिन्ट, प्याज, र कुनै पनि उच्च फ्याट खाना समावेश छन्।
यसले तपाईंको खाना खाए पछि केही बेरको लागि हिड्नको लागि छनौट नगर्न पनि मद्दत गर्दछ। यसले पाचनलाई मद्दत गर्दछ र गुरुत्वाकर्षणलाई तपाईंको पक्षमा काम गर्न मद्दत गर्दछ।
ईर्ष्याको सबैभन्दा उत्तम औषधि के हो?
हाम्रो द्रुत-संदर्भ चार्ट जाँच गर्नुहोस्।
ईर्ष्या राहत औषधि
औषधि नाम औषधि वर्ग ओभर-द-काउन्टर वा प्रिस्क्रिप्शन फारामहरू यो कसरी काम गर्दछ
टम्स (क्याल्शियम कार्बोनेट) एन्ट्यासिड OTC च्युवेबल ट्याब्लेट, ट्याब्लेट, निलम्बन पेट एसिड तटस्थ
रोलाइड्स (क्याल्शियम कार्बोनेट र म्याग्नेशियम हाइड्रोक्साइड) एन्ट्यासिड OTC च्युवेबल ट्याब्लेट, ट्याब्लेट, लोन्ज पेट एसिड तटस्थ
मालोक्स (एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, म्याग्नेशियम हाइड्रोक्साइड, र सिमेथिकोन) एन्ट्यासिड OTC Chewable गोली, तरल पेट एसिड तटस्थ
Emetrol (phosphorated कार्बोहाइड्रेट) Antiemetic OTC तरल पेट संकुचन घटाउँछ
पेप्टो बिस्मोल (बिस्मथ सबसिलिसलेट) एन्ट्यासिड, एन्टिडाइरियल OTC च्युवेबल ट्याब्लेट, निलम्बन एसोफैगसलाई एसिडबाट जोगाउँदछ
एक्सिड (निजाटिडिन) H2 (हिस्टामाइन २) अवरोधक Rx र OTC ट्याब्लेटहरू, क्याप्सुलहरू पेट एसिडको ब्लाक उत्पादन
पेप्सीड (फोटोटाइडिन) H2 (हिस्टामाइन २) अवरोधक Rx र OTC ट्याब्लेट पेट एसिडको ब्लाक उत्पादन
Tagamet (cimetidine) H2 (हिस्टामाइन २) अवरोधक Rx र OTC ट्याब्लेट पेट एसिडको ब्लाक उत्पादन
Prevacid (lansoprazole) प्रोटोन पम्प अवरोधकर्ताहरू (पीपीआई) Rx र OTC ढिलाइ भएको रिलिज क्याप्सूल पेट एसिडको ब्लाक उत्पादन
नेक्सियम (एसोमेप्रजोल म्याग्नेशियम) प्रोटोन पम्प अवरोधकर्ताहरू (पीपीआई) Rx र OTC ढिलाइ भएको रिलिज क्याप्सूल पेट एसिडको ब्लाक उत्पादन
प्रिलोसेक (ओमेप्रजोल) प्रोटोन पम्प अवरोधकर्ताहरू (पीपीआई) Rx र OTC ढिलाइ भएको रिलिज क्याप्सूल पेट एसिडको ब्लाक उत्पादन
रोलाइड बनाम टम्स
Rolaids र Tums अपच र मुद्दोको जलन उपचार गर्न उपलब्ध दुई सबैभन्दा लोकप्रिय over-the-काउन्टर एन्ट्यासिड हो। तिनीहरू पेटको एसिडको असरहरूलाई बफरिंग र निष्प्रभावीन गरेर काम गर्छन् जुन घाउ घाउमा घस्रन्छ।
त्यसोभए तिनीहरू कसरी फरक छन्? टम्समा सक्रिय संघटक केवल क्याल्शियम कार्बोनेट हो, जबकि रोलाइड्स क्याल्शियम कार्बोनेट र म्याग्नेशियम हाइड्रोक्साइडको संयोजन हो। दुबै हल्का ईर्ष्याको लागि उत्तम विकल्पहरू छन् र मागमा लिएका छन्।
यद्यपि अत्यधिक सुरक्षित ठानिन्छ, ती कब्ज, सुख्खा मुख, मुखमा धातुको स्वाद, पेशाब बढेको, र पेट दुखाइ जस्ता साइड इफेक्टहरू साझा गर्छन्। रोलाइड्समा म्याग्नेशियम हाइड्रोक्साइडको कारण, पखालाको थप सम्भावित साइड इफेक्ट पनि छ।
मायलान्टालाई के भयो?
धेरै वर्षदेखि, विशेष गरी १ 1990 1990 ० को दशकमा, मायलान्टा लोकप्रिय उत्पादन हो जुन ईर्ष्याको लक्षणहरू कम गर्न प्रयोग गरिन्थ्यो। यद्यपि, २०१० मा, ओभर-द-काउन्टर एन्ट्यासिड स्वैच्छिक रूपमा फिर्ता प्राप्त भयो किनभने उत्पादमा रक्सीको ट्रेस भएको थियो।
निर्माता, जोनसन र जोनसनका अनुसार, उत्पादनलाई फिर्ता सम्झाइएको छ त्यसैले यसलाई राम्रो सटीकतासँग पुनः बेच्न सकिन्छ, रक्सीको शोषण वा प्रतिकूल प्रभावहरूको कुनै जोखिमको कारणले होइन।
२०१ 2016 मा माल्यान्टा बजारमा पुन: प्रस्तुत गरियो र एन्ट्यासिडको रूपमा प्रयोग गर्न सुरक्षित मानियो।
घरेलु उपचार खमीर संक्रमण खुजली रोक्न
ईर्ष्या मेडिसिनको सम्भावित साइड इफेक्टहरू
सबै औषधीहरूको रूपमा, त्यहाँ केही साइड इफेक्टको जोखिम पनि हुन्छ। यसमा अवश्य पनि ईर्ष्या र अपचको औषधि समावेश छ।
ईंट्यासिड र एसिड अवरोधक (प्रोटोन पम्प इनहिबिटर वा पीपीआई पनि भनिन्छ) ईर्ष्या र GERD को लागी लिईएको औषधिहरू लिँदा केहि साइड इफेक्ट मानिसहरूले रिपोर्ट गर्छन्।
पेट दर्द र बान्ता
कुनै नयाँ औषधि सुरू गर्नु अघि, तपाईको डाक्टर वा ग्यास्ट्रोएन्टेरोलॉजिष्टसँग परामर्श लिनु र तपाईले लिनु भएका कुनै पनि औषधीहरूको खुलासा गर्नु सँधै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनकी कहिलेकाँही औषधीहरू नकारात्मक रूपमा पारस्परिक हिसाबले लिन्छन्।
गर्भावस्था को समयमा ईर्ष्या
ईर्ष्याको समयमा गर्भावस्था विशेष गरी सामान्य हो, किनकि हर्मोन प्रोजेस्टेरोनको बृद्धि भएको उत्पादनले भल्भलाई पेट घुटकीबाट आराम गर्न सक्छ।
यो गर्भावस्थाको तेस्रो त्रैमासिकको अवधिमा सामान्य छ जब बढ्दो बच्चा र गर्भाशयले पेटमा आन्तरिक दबाब थप्यो, पेटको एसिडलाई माथि धकेल्दै।
तपाईं गर्भावस्थामा ईर्ष्यालाई रोक्न सक्नुहुन्छ कम दिनको भन्दा बढि साना खाना खाएर बरु कम खाना, एक घण्टा so वा त्यो भन्दा बढी waiting खानु पछाडि खाए पछि, र मसालेदार, फ्याट अधिक, र चिल्लो पदार्थ भएका ट्रिगर खानालाई बेवास्ता गर्न।
धेरै भन्दा बढि काउन्टर एन्ट्यासिड औषधीहरू गर्भावस्थाको समयमा प्रयोग गर्न सुरक्षित छन्, तर यो राम्रो हुन्छ तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्न र गर्भधारणको समयमा कुनै औषधि वा उपचार सुरु गर्नु अघि लेबल पढ्नु राम्रो हुन्छ।
तपाईंको लागि सब भन्दा राम्रो जन्म नियन्त्रण गोली: गर्भनिरोधक विकल्पहरूको लागि एक गाइड
के गर्भावस्थामा Zoloft लिन सुरक्षित छ?
जब तपाइँ फ्लू पछि संक्रामक हुनुहुन्न
के म २४ घन्टा claritin संग benadryl लिन सक्छु?
प्राकृतिक तरीका छिटो खमीर संक्रमण बाट छुटकारा पाउन
एक पटक टाइप २ मधुमेह को लागी साप्ताहिक इंजेक्शन
एक सामान्य रक्त शर्करा पढ्ने के हो
कुन फ्लू खराब इन्फ्लुएन्जा ए वा बी हो